म कागज जस्तो ह्वार्र बलेर निभ्न चाहन्नः बर्षा राउत नायिका – Rangin Sansar Nepal Entertainment Portal
म कागज जस्तो ह्वार्र बलेर निभ्न चाहन्नः बर्षा राउत नायिका
चलचित्र ‘नाई नभन्नु ल- ४’ बाट रजतपटमा प्रबेश गरेकी नायिका बर्षा राउत चलचित्र ‘छक्का पञ्जा’मार्फत दर्शक तथा चलचित्रकर्मीको मन जित्न सफल भईन् । उनी अभिनित यी दुबै चलचित्रले दर्शको मन जित्न सफल भए सँगै निर्माताको लगानी पनि सुनिश्चित गरिदिए । ‘छक्का पञ्जा’ले त नेपाली चलचित्रले कायम गरेका अधिकांश रेकर्ड नै ब्रेक गरिदियो । अहिले उनै बर्षा अभिनित चलचित्र ‘जात्रा’ प्रदर्शनको क्रममा छ । चलचित्र जात्राको सार्वजनिक टेलर र प्रचार सामग्रीमार्फत नै दर्शकको प्रतिक्षामा पर्न सफल भएको छ । उनै बर्षासँग चलचित्र जात्रा र उनको सिने करियरका बारेमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रष्तुत गरिएको छ ।
तपाई अभिनित चलचित्र ‘जात्रा ‘प्रदर्शनको क्रममा रहेको छ । प्रचार प्रसारको क्रममा र प्रचार सामग्रीबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाईरहनु भएको छ ?
चलचित्रप्रति दर्शकहरुको अपेक्षा राम्रो रहेको पाएको छु । मेरा अघिल्ला दुई चलचित्र ‘नाई नभन्नु ल ४’ र ‘छक्का पञ्जा’ले पनि दर्शकको राम्रो प्रतिक्रिया पायो । ती चलचित्र हेर्ने दर्शकहरुले पनि यो चलचित्र पनि उस्तै राम्रो होला भन्ने अपेक्षा त हुने नै भैहाल्यो । चलचित्रको सार्वजनिक टेलरलाई पनि दर्शकहरुले अत्याधिक मन पराउनुभएको छ । टेलरमा कसैले पनि नराम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन । बिशेस शोमा चलचित्र हेर्नुहुने चलचित्रकर्मी तथा पत्रकारहरुले पनि निकै रुचाउनुभयो । यी सबै गतिबिधिलाई हेर्दा चलचित्रले राम्रो दर्शकको साथ पाउँदछ जस्तो लाग्छ ।
चलचिप्रति दर्शको अपेक्षा बढेको कुरा गर्नुभयो । चलचित्रले दर्शकको अपेक्षा पुरा गर्ला त ?तपाई स्वयंलाई चलचित्र कस्तो लागेको छ ?
मैले पनि गत बुधबारको बिशेश शोमा चलचित्र हेरेको थिए । म आफैलाई पनि चलचित्र एकदम राम्रो लाग्यो । मैले आफ्नो चलचित्र भएपनि चलचित्र हेर्दा एक दर्शको रुपमा हेरेको थिए । स्क्रीप्ट र काम गराईको हिसावले मैले चलचित्रप्रति जुन अपेक्षा गरेको थियो त्यो अपेक्षाभन्दा धेरै माथि पाए चलचित्र । मलाई बिश्वास छ चलचित्र जात्रा हेरिसकेपछि दर्शकहरुले पनि आफुले अपेक्षा गरेभन्दा माथि नै पाउनुहुनेछ चलचित्रलाई ।
दर्शकको रुपमा चलचित्र हेर्दा आफ्ना केहि कमी कमजोरी पनि देख्नुभयो की ?
कुनैकुनै पार्टमा चुकेको आभास भयो । डबिगंको क्रममा पनि रुघाको कारण स्वरमा दम आएको थिएन । कुनैकुनै सिनहरुमा यस्तो गर्नुपाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्योहोलाकी भन्ने त लागिहाल्ने रहेछ । तर खत्तमै भएछ भन्ने त कुनैपनि सिनमा लागेको छैन ।
तपाईले तीनओटै चलचित्रमा राम्रो व्यानर र अग्रज सिनेकर्मीका साथ काम गर्ने अवसर पाउनुभयो । अग्रज सिनेकर्मीहरुसँग काम गर्दाको राम्रा नराम्रा अनुभव सुनाईदिनु न ?
अग्रज कलाकारसँग काम गर्न पाउँदा नराम्रो भन्ने त केहिपनि भएन । राम्रैराम्रो भयो । नाई नभन्नु ल गर्दा बिकास आचार्य दाईले चलचित्रबारे निकै राम्रोसँग बुझाएर काम गराउनुभयो । चलचित्रमा सरोज खनाल र प्रीयंका कार्कीसँग काम गर्न पाउदा धेरै सिक्ने अवसर पनि पाए मैले । साथै छक्का पञ्जामा पनि सबै सिनियर कलाकारहरुसँग काम गर्ने अवसर पाए । दीपकराज गीरी, दीपाश्री निरौलालगायत सफल हाष्य कलाकारहरुसँग काम गर्दा पनि धेरै सिक्ने अवसर पाए । जात्रामा आउदाँ थियटरको टीमसँग काम गर्ने अवसर पाए । यो टीमबाट त झन धेरै सिक्ने अवसर मिल्यो । अभिनयलाई बास्तबिकतासँग नजिक रहेर गर्नसक्नुपर्छ भन्ने कुरा जात्रा टिमबाट सिके । यस्तो अवसर कमै मात्र कलाकारहरुले पाउदछन् जस्तो लाग्छ ।
‘जात्रा’ टिमसँग कामको अफर आएको बेला र स्क्रीप्ट पढ्दा तपाईले चलचित्र यस्तो बन्ला भन्ने जुन कल्पना गर्नुभएको थियो चलचित्र हेर्दा त्यहि अनुसार पाउनुभयो की फरक ?
बिल्कुलै फरक पाए । पशुपतिप्रसाद हेरेदेखि नै यो टीमसँग मलाई काम गर्ने एकदम चाहना थियो । त्यहि टिमबाट कामको लागि अफर आउदा टीम राम्रो छ चलचित्र पक्कै पनि छ्या भन्ने खालको हुदैन भन्ने मलाई लागेको थियो । स्क्रीप्ट पढ्दा पनि चलचित्र राम्रै हुनेमा ढुक्क थिए । तर पर्दामा चलचित्र हेर्दा त राम्रो मात्र होईन धेरै नै राम्रो पाए । चलचित्र हेरेर घर पुगेपछि मैले फेरी स्क्रीप्ट पढ्न थाले । चलचित्र असनमा रहेका तीन व्यापारीको कथा भन्छ । ती तीनजनामध्ये एकजनाको भूमिकामा रबिन्द्र झा हुनुहुन्छ । चलचित्रमा मलाई वहाँको भूमिका एकदमै मन परेको छ । अहिले रबिन्द्र झाले गरेको भूमिका पहिला अरुलेनै गर्ने कुरा भएको थिए । तर चलचित्र छायांकनमा जानुभन्दा एक दिन अघि मात्र त्यो भूमिकाको लागि रबिन्द्र दाईले गर्ने निर्णय गरिएको थियो । एकै दिनमा वहाँ यसरी क्यारेक्टरमा भिज्नुभयो की म त वहाँको कामबाट निकै प्रभावित भए । चलचित्र हेर्ने दर्शकले पनि वहाँलाई निकै रुचाउनेछन् जस्तो लाग्छ मलाई ।
सामाजिक संञ्जाल फेसबुकबाट हाम्रा थुप्रै पाठकहरुले तपाईप्रति जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । ती जिज्ञासाहरु यहाँ राख्न चाहेः
प्रविन मगरको प्रश्न छ, जात्रा पनि अन्य कुनै चलचित्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
म केहि समय ब्रेक लिन चाहन्छु । यो बर्ष छक्का पञ्जा र जात्र प्रदर्शन भैहाल्यो । लगातार चलचित्र प्रदर्शनमा आउदाँ पनि दर्शकले झण्झट मान्नुहोला जस्तो लाग्छ । त्यसैले अव अर्को बर्ष मात्र चलचित्रमा काम गर्ने योजना छ मेरो ।
अविरल श्री श्रेष्ठको प्रश्न छ, तपाईलाई पहिलो चलचित्रमामा कस्ले अफर गर्यो ?
नाई नभन्नु ल २ देखि नै बिकास दाईले मलाई चलचित्र खेल्न आग्रह गरिरहनुभएको थियो । त्यतिबेला मलाई घरबाट काम गर्न दिनुभएन । मेरो पढाई पनि सकिएको थिएन । पछि फेरी सुब्रत आचार्य दाईले बिकाश दाईले भेट्न खोज्नुभएको छ भनेर फोन गर्नुभयो । बिकाश दाईले नाई नभन्नु ल ४ को स्क्रीप्ट दिएर राम्रो छ, काम गर, तिम्रो लागि राम्रै हुन्छ भन्नुभयो । पढाई सकिएकोले घरबाट पनि चलचित्र खेल्न दिनुभयो ।
आज छ भोली छैन नामबाट फेसबुक चलाउने साथिको प्रस्न छ, तपाईको पहिलो म्युजिक भिडियो कुन हो ? पहिलो भिडियो गर्दाको अनुभव सेयर गर्दिनुन ?
मेरो पहिलो म्युजिक भिडियो रिलिज नै भएन । मनोज राजको पानीको फोका सरी भन्ने गीत थियो त्यो । पछि श्रीजना कार्कीको रोजेको मैले भन्ने गीतको भिडियो नै मेरो सार्वजनिक भएको पहिलो भिडियो हो । त्यो भिडियो गर्दाको अनुभव भन्नुपर्दा एकदमै लाज लागिरहेको थियो । पहिलो सर्ट नै धेरै मान्छेहरुको भिड रहेको ठाउँमा गर्नुपर्ने थियो । मनमनै त त्यहाँबाट भागुजस्तो भएको थियो । भिडियो गर्न सक्दिन क्यारे जस्तो भएको थियो । फेरी आफ्नो मनलाई बुझाए, कुरा यति अगाडि बढिसक्यो जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्ने लग्यो । पछि काम गर्दै जाँदा सजिलै भयो ।
सुमन जंगको प्रश्न छ, तपाईको बिचारमा सेक्स के हो ? यस्को अनुभव छ की छैन ?
यस्तो पनि सुनाउनु पर्छ र भन्या ? यो त नेचुरल कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई । जन्म मृत्यु, सेक्स सबै माथिकै देन हो जस्तो लाग्छ । यसबारे यत्तीनै भनौं होला ।
प्रचण्ड राज लामिछानेको प्रश्न छ, चलचित्र जात्राबाट कत्तिको आशा राख्नुभएको छ, कतै तपाईको आशा पनि जात्रा मात्र त हुने हैन ? चलचित्र गर्दा स्क्रीप्ट हेर्नुहुन्छ की पैसा ?
जात्रा एकदमै राम्रो चलचित्र बनेको छ । जात्राले मलाई जात्रा बनाउने हो की दर्शकहरुलाई मनोरञ्जन दिएर जात्रा बनाउने हो त्यो त दर्शको हातमा छ । मेरो हातमा छैन । हामीले हाम्रो तर्फबाट शतप्रतिशत काम गरेका छौं । जहाँसम्म स्क्रीप्ट हेर्नुहुन्छ की पैसा भन्ने तपाईको जिज्ञासा छ म पहिला स्क्रीप्ट र टीम हेर्छु, त्यपछि मात्र पैसा हेर्छु ।
इमान जंग बानियाको प्रश्न छ, बर्षा जिको मुख्य भुमिका रहेको चलचित्र कहिले हेर्न पाईएला ?, चलचित्र हिट भएपनि तपाई सोचेजस्तो हिट किन हुनसक्नुभएन ? र तपाई पनि कार्यक्रमको बाहाना बनाएर अमेरिकातिर पलायन हुनुहुन्छ की ? तपाईको फिगर अझ बढ्ने हो कि भनेर वहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
नाई न भन्नु ल ४ मा मेरो नै मुख्यभूमिका नै थियो । त्यो चलचित्रबाट त्यति चर्चा पाउन सकिन मैले । तर चलचित्र राम्रै चल्यो । तर छक्का पञ्जामा छोटो रोल भएपनि दर्शकले निकै रुचाउनुभयो मेरो भूमिका । मुख्य भूमिकामा भएमात्र चर्चामा आउने भन्ने हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई । जहाँसम्म चर्चामा आउनुभएन भन्ने कुरा छ चर्चा भन्ने कुरा बिस्तारै बिस्तारै हुने हो । १०, १२ बर्ष यो क्षेत्रमा काम गर्नुभएका कलाकारहरु त अहिलेसम्म चर्चामा आउन सक्नुभएको छैन । म त यो क्षेत्रमा लागेको भर्खरै २ बर्ष पुरा भएको छ । एक्कैचोटि चर्चामा आएर सेलाउनु भन्दा बिस्तारै बिस्तारै चर्चामा आउनु नै राम्रो हुन्छ । म कागज जस्तो एक्कैछिन ह्वार्र बलेर निभ्न चाहन्छ । बिस्तारै बिस्तारै बलिरहन चाहन्छु ।
अमेरिका पलायनको कुरामा म के भन्न चाहन्छु भने मैले चलचित्र सँगै अन्य पेशालाई पनि अगाडि बढाएको छु । मेरो होम डेकोरसम्बन्धी व्यबसाय पनि छ । त्यसैले मलाई अमेरिका गएर अरुको काम गनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । मलाई थाहा थियो चलचित्र क्षेत्रमा मात्र लागेर सेटल हुन गाह्रो छ भनेर । त्यसैले मैले यो क्षेत्रमाप्रबेश गर्दै गर्दा अन्य पेशालाई पनि अगाडि बढाईरहेको छु । जहाँसम्म मेरो फिगरको कुरा वहाँले गर्नुभयो मलाई थाइराईड भएकोले पनि अल्ली मोटाएको थिए । अहिले त्यस्को औषधी पनि आईरहेको छु, साथै बजन घटाउन बिहान, बिहान दौडने पनि गरेको छु, फिगरप्रति सचेत हुँदैछु ।
जात्रा हास्यप्रधान भएपनि पारिवारीक चलचित्र हो । यसमा पैसाको जात्रादेखि लिएर साथीभाईबीचको जात्रा समाबेश छ । चलचित्र हेर्ने दर्शकले कहि न कहि चलचित्रभित्र आफुलाई नै पाउनुहुन्छ । चलचित्रमा हासो मात्र होईन रोदन पनि समाबेश छ । चलचित्रले समय र पैसाको दुरुपयोग हुन दिदैन । त्यसैले दर्शकहरुलाई यो चलचित्र हेरेर हाम्रो कामको बारेमा राम्रो नराम्रो प्रतिक्रिया दिनुहुन म अनुरोध गर्दछु ।
गायिका सुनितामी परियारलाई आँखा मार्दा पर्‍यो पिरलो(भिडियो)
आकस्मिक कोषका लागि पोर्चुगलमा सांस्कृतिक कार्यक्रम
तरकारीवाली कुशुमलाई एक शिक्षकको मर्मस्पर्शी चिठी